रेडियो सुनेर गाईले दुध दिए « Clickmandu
रेडियो सुनेर गाईले दुध दिए
प्रकाशित मिति :5April, 2017 12:11 pm
इलाम । गाई पनि रेडियो सुन्छन् भन्दा तपाई पत्याउनु हुन्छ ? तर इलाममा जब गाईले रेडियो सुन्छन्‘‘पाउर काडेर’ (फिँज काडेर) मस्त हुन्छन् ।
सफा, चटक्क परेको गाईगोठ देखेर यहाँ घुम्न आउने अनेकौं कृषकहरु मन्त्रमुग्ध हुन्छन् र नयाँ प्रविधि र तरिका सिकेर फर्किन्छन् ।
गाईवस्तु तनावमुक्त भएपछि दूध उत्पादन घट्दैन उनले भने। सफा, चटक्क परेको गाईगोठमा अनेकौँ कृषक उनले सञ्चालन गरेको फार्मबाट मन्त्रमुग्ध हुन्छन् र नयाँ प्रविधि, तरिका सिकेर फर्किन्छन् ।
व्यावसायिकरुपमा अधिकतम ४० वटा होल्स्टेन नामक उन्नत जातका गाईपालन गरेर दैनिक १० हजार ५ सय रुपैयाँ सम्म आम्दानी लिएका रेग्मीले अहिले दैनिक १ सय ५० लिटर दूध उत्पादन भइरहेको बताए ।
उनले भने,‘व्यावसायिक गाईफार्ममा दूधबाट मात्रै आम्दानी लिदैनौं, गाईको मल र मूत्रबाट पनि आम्दानी लिइरहेका छौँ ।’
युवा धेरै विदेशिएको अवस्थाले आफ्नै देशमा काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ आफ्ना तीन भाइको सल्लाहमा व्यावसायिक गाई फार्म सञ्चालन भएको जानकारी दिँदै रेग्मीले तत्काल नाफाभन्दा पनि पाँच वर्षको लक्ष्य लिएर फार्म सञ्चालन गरेको उनले बताए ।
विसं २०७० देखि ३ दाजुभाइ, कुमार, यमकुमार र अरुण रेग्मीले सञ्चालन गरेको गाई फार्ममा सुरुको चरणमा १० लाख रुपैयाँको लगानी भएको थियो , तर पछि फार्ममा कुल ५० लाख रुपैयाँको लगानी भएको थियो ।
गोठ सुधारलगायतका विभिन्न कार्यक्रमबाट पटकपटक अनुदान लिएका रेग्मीले नयाँ प्रविधिमार्फत गाई दुहुन्छन् । ‘मिल्किङ मेसिन’ नामक उपकरण गाईको थुनमा जडान गरेर ६ देखि १५ मिनेटमा दुई वटा गाई दुहुन सकिने जानकारी दिँदै उनले बढीमा २६ लिटरसम्म दूध दुहुन सकिने बताए ।
व्यवसायिक फार्मका लागि १ सय १० रोपनी जग्गा लिजमा लिएर अम्रिसो र नेपियर घाँस उत्पादन गरेर १० केजी सुक्खा घाँसमा २ केजी हरियो घाँस मिलाएर पशु आहारा पूरा गरेको उल्लेख गरे ।
भारतको पटनाबाट झन्डै ३ लाख रुपैयाँको लागतमा सो उन्नत जातको गाई भित्र्याएर फार्म सुरु गरेका रेग्मीले ७५ प्रतिशत बीमा गरेका छन् ।
जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, धुलिखेलका प्रमुख डा. नारायण श्रेष्ठले पशुको मनमा भएको त्रास हटाउन संगीत प्रयोगमा आएको जानकारी दिँदै त्यसबाट उत्पादनमा वृद्धि हुने र पशु स्वास्थ्य पनि राम्रो हुने बताए । रासस